Farmaajo, Afwerki iyo Abiye oo ka wadahadlaya qaadista Cunaqabateynta hubka! • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Farmaajo, Afwerki iyo Abiye oo ka wadahadlaya qaadista Cunaqabateynta hubka!
Farmaajo, Afwerki iyo Abiye oo ka wadahadlaya qaadista Cunaqabateynta hubka!
November 9, 2018 - By: Maxamed Cismaan
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Eriterea Isaias Afwerki ayaa maanta gaaray dalka Itoobiya halkaasi oo ay kulan sadex geesood ah kula leeyihiin hogaamiyaha Itoobiya ee Abiye Ahmed.
Kulanka hogaamiyayaashan oo ka dhacaya caasimada ismaamulka Amxaarada ee Bahir-Dar ayaa ka wadahadlaya iskaashiga sadexda wadan oo qeyb ka ah hagaajinta xiriirka sadexdan dal ee jaarka ah.
Shirkan ayaa lagu soo beegay maalmo kahor xili lagu wado in Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay maalinta Arbacada ah kulan gaar ah ka yeeshaan Qaraar cunaqabateynta hubka looga qaadayo dalka Eriterea oo horey loogu eedeeyey inuu taageero siiyo kooxda Al Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya.
Sidoo kale kulanka Arbacada ka dhici doona magaalada New York ayaa la filayaa in Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay uu sii cusbooneysiiyo cunaqabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya.
Bishii Agoosto ayaa wafdi balaaran oo ka socda Eriteria markii ugu horeysay booqasho ku tageen magaalada Muqdisho iyagoo kala hadlay dowlada Federaalka xiriirka diblumaasiyadeeda ee labada dal ka dhaxeeya. Safarkaasi ayaa waxaa kasii horeeyey booqashadii Madaxweyne Farmaajo ku tagay Asmara bishii Luulayo ee sanadkan.
Xukuumada Isais Afwerki ayaa dadaal ugu jirta in laga qaado cunaqabateynta isla markaana la kaashaneysa dalalka ay jaarka yihiin oo ay xiriirkooda soo fiicaanayeen bilihii lasoo dhaafay, marka laga reebo dalka Jabuuti oo la sheegay inuu weli kasoo horjeedo qaadista cunaqabateynta saaran Asmara.